Nanentana ny Malagasy, indrindra ny mpitia baolina kitra i Andriatsima Faneva Ima. Ao amin’ny pejiny facebook no nanaingany ny rehetra « Hiara-hirona eto Mahamasina anio ho an’ity Tanindrazana mamintsika ity ». « Manainga antsika rehetra hitrotro am-bavaka ny mpilalao, hiara-hanohana, ho iray fo sy fanahy », fa « Ny firaisankinantsika rehetra no amboara lehibe ho an’i Madagasikara » ka « Andao atambatra ny hery ho an’i Madagasikara sy Barea », hoy i Faneva Ima, izay manamafy fa « Barea Mandrakizay ! ». Ity lalao anio hifandonan’i Madagasikara sy Etiopia ity, izay hiadiana tapakila hiatrehana ny CAN 2021 no lalao farany hataon’i Faneva Ima ao amin’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra na Barea, ka hanaovany veloma ny mpakafy baolina kitra Malagasy sy ho fisaorany ireo rehetra namolavola azy ho tonga mpilalao baolina kitra sy ireo mpiara-milalao taminy.
samedi, 16 novembre 2019 10:14
Kitra - Fifanintsanana CAN 2021: Hahita mivantana amin’ny TVM Antananarivo, « en différé » ho an’ny amin’ny Faritra
Hotanterahina anio tolakandro amin’ny efatra ora etsy amin’ny Kianja Monisipaly Mahamasina ny lalao fifanintsanana hiadiana ny tapakila ho amin’ny CAN 2021 hatao any Cameroun, hifanandrinan’i Madagasikara sy Ethiopia. Hitantara mivantana ny lalao ny Radio Nasionaly Malagasy (RNM), afaka manaraka mivantana ny lalao amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Miandry ny fahataperan’ny lalao kosa ireo any amin’ny Faritra vao afaka hahita ny baolina amin’ny TVM, mety any amin’ny valo ora sy sasany alina any. 600 tapitrisa Ariary (150 000 Euros) ny saran’ny fampitana mivantana ny lalao tsy maintsy aloa amin’ny CAF na Kaonfederasiona afrikana amin’ny baolina kitra raha te handefa izany amin’ny fahitalavitra, hoy ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny ORTM.
jeudi, 14 novembre 2019 16:21
Kianjaben’i Mahamasina: Hovitaina alohan’ny 26 jona 2020 ny asa fanitarana
Tamin’ny 13 jolay 2019 niverenan’ny Barea an’i Madagasikara an-tanindrazana, taorian’ny dingana lehibe vitany tonga teo amin’ny ampahefadalana tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika andiany faha-19 natao tany Egypta no nanambaran’i Andry Rajoelina, filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, teo Mahamasina ny tetikasa hanatsarana ny kianja monisipalin’i Mahamasina mba hahazaka mpijery hatrany amin’ny 50 000 ka hatramin’ny 60 000 sy hanara-penitra. Raha ny vaovao notaterin’ny gazety mpivoaka isan’andro Midi Madagasikara, androany, dia hatomboka amin’ny volana desambra 2019 io ny fanavaozana sy fanitarana ny kianja monisipaly Mahamasina, ary hovitaina alohan’ny 26 jona 2020 ny asa amin’izany. Tamin’ny taona 1990, nampiantranoan’i Madagasikara ny Lalaon’ny Nosy andiany fahatelo no nisy asa fanitarana lehibe natao tamin’ity kianja ity, ahafahany mandray mpijery baolina manodidina ny telo alina.
mercredi, 13 novembre 2019 21:05
Madagasikara vs Ethiopie: Miandrandra ny handefasan’ny TVM mivantana ny lalao ny mpitia kitra manerana ny Nosy
Hotanterahina ny tolakandron’ny sabotsy 16 novambra izao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina manomboka amin’ny 4 ora, ny lalao hifandonan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Walya Etiopianina. Miandrandra ny handefasan’ny Televiziona Malagasy (TVM) mivantana ny lalao ny mpitia kitra manerana ny Nosy. Mikasika ity lalao ity, dia efa tapitra avokoa ny tapakila ho an’ny « tribune » afovoany sy ny andaniny roa. Ny andron’ny lalao, manomboka amin’ny enina ora maraina kosa ny fivarotana ny karatra ho an’ny eny amin’ny « gradin ».